နယူးပန်အာဖရိကန်လွှဝန်ဆောင်မှု MVMO များအတွက် Simplestream နှင့်အတူ V-Nova အပေါင်းအဖေါ်များ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » နယူးပန်အာဖရိကန်လွှဝန်ဆောင်မှု MVMO များအတွက် Simplestream နှင့်အတူ V-Nova အပေါင်းအဖေါ်များ
နယူးပန်အာဖရိကန်လွှဝန်ဆောင်မှု MVMO များအတွက် Simplestream နှင့်အတူ V-Nova အပေါင်းအဖေါ်များ
•အဆိုပါ P ကို ​​+ codec ကိုတိုးမြှင့်နည်းပညာစှာတိုက်ကြီးအနှံ့မိုဘိုင်းကွန်ရက်များပေါ်တွင်၎င်း၏ပရိသတ်ကိုလက်လှမ်းမမီတိုးမြှင့်ဖို့ MVMO ဖွ
• Simplestream ပလက်ဖောင်း 2G မှ 5G ကနေအားလုံးကွန်ရက်များအဘို့ခိုင်ခံ့ပြီးအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုကို enable လိမ့်မယ်တဲ့ service ကိုကယ်နှုတ် P ကို ​​+ ပေါင်းစပ်ပြီး
• MVMO အာဖရိကဖြတ်ပြီးဖန်တီးမှုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မိမိတို့၏ပရိသတ်ကိုနှင့်ထောက်ခံမှုတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်အတူလွတ်လပ်သောအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများချိတ်ဆက်ရန်ဖြန့်ဖြူးပလက်ဖောင်းပေးသွားမှာပါ
လန်ဒန်, ဗြိတိန် - 11 စက်တင်ဘာလ 2019 - V-Nova, ဗွီဒီယိုချုံ့နည်းပညာများတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, ကလနှောင်းပိုင်း 2019 အတွက်အာဖရိကမှာဖြန့်ချိမှုကြောင့်တစ်ဦးသဲအသစ်က streaming ဝန်ဆောင်မှု, MVMO, များအတွက် key ကိုပေးရန်ကြောင်းကြေညာဖို့ဝမ်းသာသည်။ လာမယ့်မျိုးဆက် OTT တီဗီရှေ့ဆောင်အတူ ပူးပေါင်း. Simplestreamအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုတိုက်ကြီးတစ်လျှောက်လုံးပရိသတ်တွေမှအရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်မကယ်မလွှတ်မှ high-ထိရောက်မှု V-Nova P ကို ​​+ codec-Agnostic တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသော-to-လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ Simplestream streaming များပလက်ဖောင်းပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်။
: P + MVMO ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မှပထမဦးဆုံးပလက်ဖောင်းများ၏တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဆိုလိုတာကလာမည့် MPEG-5 အပိုင်း2LCEVC ချုံ့စံ, ထောက်ခံပါတယ်။ MVMO နှင့်အတူပြုလုပ် Streams အကြောင်းအရာများအတွက်ဝယ်လိုအားအာဖရိကတလွှားကြီးထွားလာအဖြစ်ကြီးမားသောအလားအလာရှိပါတယ်တဲ့ဖုန်းကို signal ကိုရှိဘယ်နေရာမှာမဆိုဗွီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည်။
MVMO (ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်, ဗီဒီယို, Music အခွင့်အလမ်း), အကို Creative အာဖရိကချိန်း (CAX), Afreximbank ကကမကထပြုသည့်ဖန်တီးမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စျေးကွက်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်ဦးဖြန့်ဖြူးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ MVMO အာဖရိကအတွက်အရည်အသွေးမြင့် streaming များအကြောင်းအရာများအတွက်လန်းလာသောဝယ်လိုအားခိုင်မာအောင်ကူညီပေးဖို့သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများမကြာမီအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်ခံရဖို့နှင့်အတူယခုပင်လျှင်, ရှေ့ဆက်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်၎င်း၏အရာရှိတဦးကပစ်လွှတ်အတော်ကြာနေရာများတွင် trialing, MVMO Times သတင်းစာအပါအဝင်အဓိကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဖြစ်ပါတယ် မာလ်တီမီဒီယာ ပလက်ဖောင်းများအတွက်သီးသန့်သတင်း Affiliate အဖြစ် TMM, ဒါပေမယ့်လည်းထူးခြားလွတ်လပ်သောထုတ်လုပ်သူများအပွားမြန်တဲ့ကြီးထွားလာအာဖရိကဖန်တီးမှုစက်မှုလုပ်ငန်းကိုထောကျပံ့ဖို့သူတို့ရဲ့ content တွေကိုထုတ်ဝေရန်နှင့် monetise ဖို့အတှကျပလက်ဖောင်းများကိုပါလိမ့်မယ်။
အာဖရိကမှာဆယ်လူလာအခြေခံအဆောက်အအုံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအံ့ဆဲဆဲပေမယ့်လူအတော်များများနေဆဲသာ 5G သို့မဟုတ် 2G မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိအချို့သော 3G ကွန်ရက်များနှင့်အတူပွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှထို့ကြောင့်အရေးကြီးသောအခါအလွန်နိမ့်သော interlacing ရှိနေပါသည်မှာကြံ့ခိုင်သောဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်ခြွင်းချက်အရည်အသွေးကိုနှစ်ဦးစလုံးပေး။
V-Nova CEO နဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Guido Meardi အဆိုအရ "Simplestream ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပလက်ဖောင်းအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးတော်လှန်ခြင်းနှင့်အသစ် streaming များန်ဆောင်မှုများစတင်အသစ်မြေပြင်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ဆက်လက်သိရသည်။ ဒါကြောင့်လူတွေကိုသာ2Kbps တစ်ဘစ်နှုန်းနှင့်အတူပင် 100G ကွန်ရက်များပေါ်တွင်ဗီဒီယိုကိုခံစားရန်ခွင့်ပြုပေမယ့်လည်းအပြည့်အဝအရည်အသွေးမြင့်မားဖွအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ P ကို ​​+ software ကိုစာကြည့်တိုက်ကဒီဝန်ဆောင်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖို့အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါသည် HD ရုံ 1Mbps မှာ။ Simplestream ရဲ့ပလက်ဖောင်းသို့ P ကို ​​+ ပေါင်းစပ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အခွင့်အလမ်းကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ "
ဒန် Finch, Simplestream ဦးစီးချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အရာရှိ comments: "ကျနော်တို့ကဒီအကျယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်မိတ်ဆက်အပေါ် MVMO နဲ့ V-Nova နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ခံရဖို့အလွန်ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့စားသုံးသူတစ်ဦးပိုကြီးလက်လှမ်းမမီနှင့်မိုဘိုင်းကွန်ရက်များပေါ်တွင်အထူးမှီခိုဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့အာဖရိကအဖြစ်နယ်မြေများတွင်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုတိုးတက်လာသောအရည်အသွေးကို enable V-Nova ရဲ့: P + နည်းပညာကိုအဘို့အလားအလာအများကြီးကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုပလက်ဖောင်း streaming အဆုံးသတ်အဆုံးအနိုင်ရတဲ့နှင့်အတူပေါင်းလိုက်သောသောယခုကျယ်ပြန့် EMEA ဖြတ်ပြီးမွေးစားဖြစ်ပါတယ်, ကျနော်တို့ကဒီ service ကိုအာဖရိကရဲ့လန်းလာသော OTT တီဗီကဏ္ဍတစ်ခုတက်ကြွထို့အပြင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ "
Times သတင်းစာများ၏စန်ဒရာ Iyawa, CEO ဖြစ်သူ မာလ်တီမီဒီယာ နှင့် MVMO များအတွက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အကြောင်းအရာအရာရှိ, ဖြည့်စွက်: "Simplestream နဲ့ V-Nova နည်းပညာများများ၏ပေါင်းစပ်ငါတို့အားတစုံတခုသောမိုဘိုင်းကွန်ရက်ဖြတ်ပြီးတစ်ကျယ်ပြန့်ထိရသေးသောပရိသတ်ကိုရောက်ရန်ခွင့်ပြုမယ့်စွယ်စုံများနှင့်မြင့်မား-အကျိုးရှိစွာ streaming များပလက်ဖောင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ဒီဇင်ဘာလတွင်ခီဂါးလီ, ရဝမ်ဒါအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ CAX တနင်္ဂနွေအဖြစ်အပျက်မှာ MVMO စတင်နှင့်ဤထူးခြားသောအသစ်ကပလက်ဖောင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးကြည့်ရှုကြိုဆိုမျှော်လင့်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ "
CAX အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက cax.africa/.
Simplestream တစ်လန်ဒန်အခြေစိုက်ရုံးချုပ်ကုမ္ပဏီ, ရှိသမျှ OTT ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-2-VOD နှင့် On-demand တီဗီန်ဆောင်မှုအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 2010 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Simplestream လျင်မြန်စွာလက်လှမ်းမမီခြင်းနှင့်ဝင်ငွေတိုးပွားလာလာမည့်မျိုးဆက်တီဗီန်ဆောင်မှုများစတင်ရန်ထုတ်လွှင့်, ပလက်ဖောင်းအော်ပရေတာ, အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါတယ်။ Simplestream တစ်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့် A + E ကို Networks, AMC ကွန်ယက်နိုင်ငံတကာအပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များမှ cloud-based ဖြေရှင်းနည်းများ, Channel ကို4သတင်းကော်ပိုရေးရှင်းထောက်ပံ့ Sony က, UKTV နှင့် QVC ။
Simplestream များအတွက် platform ဆက်သွယ်ရေး
+ 44 (0) 207 486 4900 / [အီးမေးလျ protected]
ခေတ်သစ်ကိုတွင်သတ်မှတ်မည် Tech မှစက်ရုံများအတွက်ကျားနည်းပညာသိုလှောင်မှုနဲ့ Networking ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည် - စက်တင်ဘာလ 23, 2019
နယူးပန်အာဖရိကန်လွှဝန်ဆောင်မှု MVMO များအတွက် Simplestream နှင့်အတူ V-Nova အပေါင်းအဖေါ်များ - စက်တင်ဘာလ 11, 2019
ကျားနည်းပညာ IBC 2019 မှာပူးပေါင်းသိုလှောင်မှုနဲ့ Workflows တင်ဆက်ပေးတယ် - စက်တင်ဘာလ 11, 2019
5G ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ကို Creative အာဖရိကချိန်း MPEG-5 အပိုင်း2LCEVC MVMO OTT P+ Simplestream SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows လွှ Times ကမာလ်တီမီဒီယာ TMM TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် V-Nova ဗီဒီယိုကို Compression ကို	2019-09-11
ယခင်: ESL စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားဖြစ်ရပ်များအတွက် Intinor ရွေးကောက်
နောက်တစ်ခု: ဆားဘီးယားနှင့်ခရိုအေးရှားခုနှစ်တွင် DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကိုခနျ့အပျဖြန့်ဖြူး
အပိုင်းအချိန်ထုတ်လုပ်မှုလေယာဉ်အမှုထမ်း - အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ်